Lugihii Messi & Mpabbe, Farsamadii Ronaldo Nazario,
Sida lagu helo weeraryahan dhamaystiran, meel walba ku wanaagsan, farsamo kasta oo looga baahdana leh, waa waxa ugu adag kubadda cagta.
Koox walba oo dunida guudkeeda ah waxay raadisaa weeraryahan dilaa ah oo marka kubaddu soo gaadho, si fudud shabaqa u gaadhi kara, gool-dhalintuna aanay dhibaato ku noqonaynin, kaas oo kaliya aan lugtiisa ku dhalinayn ee meel walba oo ay kubaddu kaga soo hagaagto sida ugu habboon ugu maaraynaya.
Qofka waxaas oo dhan leh, sidee ayaa lagu heli karayaa, ma sidii mishiin la dalbanayo oo cid walba ka ay doonayso loo samaynayaa?
Si kastaba, khabiirka ciyaaraha ee Julio ‘Maldini’ Maldonado ayaa waxa uu shaaciyey nooca uu yahay weeraryahanka ay koox walba u baahan tahay, kaas oo uu ka dhigay mid xiddigaha ugu waaweyn ee dunida midba meel ka shabbaha.
Min Ronaldo Nazario, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe, Marco Van Basten iyo Carlos Santillana, ayaa uu soo taxay si uu midba meel ugaga ekaado.
Awoodda uu kubadda u yeelanayo weeraryahanka fiican ayuu tilmaamay in looga baahan yahay inuu ahaado sida halyeygii reer Brazil ee Ronaldo Nazario oo uu raxan ciyaartooyo ah si fudud u dhaafi karayo, goolkana si aanu is-dhibin u dhalin karayo.
Orodka marka kubadda loo dhigo meel bannaan ayaa uu tilmaamay in looga baahan yahay inuu sida Jamie Vardy oo kale ahaado oo mar walba ay maxkadiisu ahaato mid usii jeedda dhinaca goolka iyo kubbad ay ciyaartoygiisu kasoo dhex-saaraan difaaca oo meel bannaan loo dhigo, kaddibna uu sida dabaysha mar kaliya uga dhex-boodo.
Degdegga marka ay kubaddu goolka hortiisa joogto, iyadoo aanay cid badan ka filaynin, inuu awood u leeyahay in kaliya la arko kubadda oo shabaqa kusii socota oo dadka dhaaftay, ayaa ah waxa uu Marco van Basten kasoo qaatay.
Julio ‘Maldini’ Maldonado, waxa uu weeraryahanka ay koox walba u baahan tahay, ku sheegay, in mucjisada lugta bidix ee Lionel Messi oo kale uu leeyey, ciyaartoyda kasoo horjeedana uu masaafo dhow si fudud ugu garaaci karayo, laagga xorta ahna uu yahay wax uu isbeddel ku samayn karayo.
Lugta midig ee Kylian Mbappe ayaa uu sidoo kale xusay inuu lahaado, waxaana sii raaca in kubbad-madaxaynta uu laacibkii mucjisada ku ahaa ee Carlos Santillana uu sidiisii oo kale ahaado, isla markaana meel kasta oo ay kubaddu taallo sidii uu la ballamay ayuu ula doonto.
Ka faa’iidaynta fursadaha goolka hortiisa, taas oo ay ku lammaan tahay nasiib ayuu Gerd Muller usoo xushay inuu uga ekaado.
Gary Lineker oo marka uu goolka hor-joogo yaqaanay halka ay tahay inuu toogto ee uu kubadda dhigayo, ayuu isagana ka doonayaa in weeraryahanka koox walba u baahan tahay uu lahaado.
Ugu dambaynta Cristiano Ronaldo ayuu uga baahan yahay inuu lahaado shaqsiyaddiisa guul-doonista iyo sida uu ciyaartoyda kale mar walba uga dalbado inay wax walba u huraan sidii libinta loo heli lahaa.
Xulasha Julio ‘Maldini’ Maldonado oo kooban:
Sawirkan hoose, ee sagaalka ciyaartoy ka garab muuqdaan, waa ka uu doonayo in meel walba uu weeraryahanka loo baahan yahay uga ekaado, laakiin miyaanay dhalanteed iyo riyo ahayn? miyey tahay wax dhici karaya? Miyey se adiga kula tahay akhriste in la heli karayo weeraryahan noocaas ah? Haddii ay dhacdo oo ay koox nasiib u yeelato in AxadleTM noocaas ah usoo baxana, miyey jiri lahayd cid qaban karta? Fikirkaaga noo dhaaf.